ငှက် Info. About. What's This?
ⓘ ငှက် ..
ငှက် ဆောင်းပါးတိုများ ငှက် ခန္ဓာဗေဒ ငှက်များနှင့် လူသား
ကက်ဆိုဝါရီငှက်ကုလားအုပ်ပု တို့သည် မပျံသန်းနိုင်သော ငှက်ကြီးများမျိုးစုတွင် ပါဝင်သည်။ သူတို့သည် ရက်တိုက် ဟုခေါ်သည့် ပျံသန်းခြင်းမရှိသော ငှက်အုပ်စု တွင် ပါဝင်သည်။ ငှက်ကုလားအုပ် နှင့် ကီဝီငှက်အသေးစားတို့မှာလည်း ရက်တိုက်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ ကက်ဆိုဝါရီတို့သည် နယူးဂီနီနှင့် ဩစတြေးလျ အရှေ့ပိုင်းရှိ မုတ်သုံသစ်တောများတွင် နေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။ သူတို့သည် လူတို့နှင့် ထိတွေ့ရန် ကြောက်ရွံ့ပြီး တောနက်ထဲတွင် နေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။ သူတို့သည် ဒေါသထွက်လေ့ ရှိပြီး လူတို့ကိုလည်း တိုက်ခိုက်လေ့ ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် သူတို့အကြောင်းကို လေ့လာရန် ခက်ခဲသည်။
ကတ္တဝါငှက် သည် ကြက်တူရွေးကဲ့သို့ လိမ်မာ ရေးခြားခြင်းမရှိလှသော်လည်း ကြက်တူရွေးကဲ့သို့ပင် စကား ပြောနိုင်သည်။ သို့သော် ကြက်တူရွေးလောက် အမှတ်သညာ မရှိဘဲ စကားတစ်ခွန်းကိုသာ အထပ်ထပ်အခါခါ ပြန်လည် ရွတ်ဆိုတတ်သည်။ ကတ္တဝါအစစ်ကို ကက်ကတ္တဝါဟုခေါ် သည်။ ဩစတြေးလီးယားတိုက်နှင့် အရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစုတို့တွင် တွေ့ရ၏။ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၁ မျိုးခန့်ရှိပြီး Cacatuidae ဟုခေါ်သည့် မျိုးတွင်ပါဝင်သည်။ အသွေးအရောင်မှာနေထိုင်ရာ အရပ် ဒေသ အလျောက် အဖြူသက်သက်၊ ကိုယ်လုံးအဖြူအမောက်အဝါ ၊ ကိုယ်အမဲပေါ် တွင် ရင်အုပ်အနီ၊အမြီးအနီ၊ အဝါ၊ အဖြူ အမျိုးများ၊ Cockatiel ခေါ် အသေးဆုံး အနွယ်၊ ဒေသ အခေါ် Gang မျိုး အဖို ၌ မျက်နှာ နှင့်အမောက် ၌ အန ...
ကနေရီဟု အမည်တွင်သည့်ငှက်ကို စပိန် အပိုင်ဖြစ်သော ကနေရီကျွန်းစုတွင် မူလပထမ တွေ့ရသည်။ ၁၆ ရာစုနှစ်လောက်တွင် ထိုငှက်များကို လှောင်အိမ်ငှက်များ အဖြစ်ဖြင့် ကနေရီကျွန်းမှ အီတလီနိုင်ငံ သို့ စတင်ယူဆောင် လာကြသည်။ ယခုအခါတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာပင် ကနေရီငှက် များကို လှောင်အိမ်သွင်း၍ အလှမွေးကြ၏။ ကနေရီငှက်သည် ဖင့်စာကလေးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ အရိုင်းဘဝတွင် သူတို့ ၏ အရောင်မှာ ညိုဝါဝါ သို့မဟုတ် ဝါစိမ်းစိမ်း ဖြစ်သည်။ ကနေရီ ငှက်မကြီးသည် အသိုက် ဆောက်လုပ်၍ ဥများကို ဝပ် ပေးသည်။ ဥများမှာ အပြာရောင်ဖြစ်၍ တစ်မြုံလျှင် ဥလေးငါး လုံး ရှိတတ်သည်။ ငှက်ဖိုကမူ ငှက်ပေါက်စကလေးများကို အစာ ရှာကျွေးသည်။ ကနေရီငှက်သည် သဘာဝအလျောက် သီခ ...
ကမ်းပါးယံ မိုးဆွေငှက် သည် ဟီရွန်းဒင်ဒေး မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သော ပျံလွှားငှက် အုပ်စုဝင် ငှက်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ထိုငှက်တို့သည် မြောက်အမေရိကတွင် ပေါက်ဖွားပြီး အသိုက်ပြောင်းလေ့ ရှိသော ငှက်များ ဖြစ်ကာ တောင်အမေရိက တွင် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ဘက် ဒေသ အထိ ဆောင်းခိုနေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။ အနောက်ဥရောပ ဒေသတွင် အလွန်တွေ့ရခဲသော ငှက်မျိုး ဖြစ်သည်။
ကရကတ်သည် ဝမ်းဘဲတစ်မျိုးဖြစ်၏။ ကမ္ဘာအရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင် နေထိုင်၍ ရေအိုင် ရေကန်များ တွင် ကျက်စားလေ့ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမြဲတမ်း နေထိုင် သော ငှက်တစ်မျိုး ဖြစ်၏။ ဤငှက်သည် အလျား ၁၃ လက်မခန့်ရှိ၍ ဝမ်းဘဲမျိုးတွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အမွှေးအတောင် စုံပြီး သော ငှက်ဖိုသည် ဦးခေါင်းညိုမည်း၍ တစ်ကိုယ်လုံး ဖြူဖွေးနေသည်။ လည်ပင်း အောက်ပိုင်းတွင် မည်းနက်သော အရစ်ကြီးတစ်ခု ပါရှိသည်။ ကိုယ်အထက်ပိုင်းမှာ အစိမ်းနှင့် ခရမ်းရောင်နု ဖြစ်၏။ ခြေထောက်နှင့် နှုတ်သီးမှာ မည်း၍ မျက်စိမှာ နီသည်။ အဖိုနှင့် အမမှာ အနည်းငယ်သာ ကွာခြား၍ ငှက်ကလေး များမှာ ငှက်မနှင့်ပို၍ တူကြသည်။ ကရကတ်သည် မြစ်ပြင်နှင့်တကွ သစ်ပင်ချုံ့ဖုတ် ပေါများ သေ ...
ကလူကွက်ကို ရေကြက်မဟုလည်း ခေါ်သည်။ ဤငှက်ကို အရှေ့တိုင်း ဒေသများတွင် တွေ့ရ၍၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရာသီဥတု သင့်လျော်သော ဒေသများတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အလျား ၁၂ လက်မခန့်ရှိ၍၊ ဦးခေါင်းတွင် မွဲပြာရောင် ဖြစ်သည်။ ကလူကွက်သည် ရေတွင် ကျက်စား သောငှက်ဖြစ်၍၊ နံနက်ခင်းနှင့် ညနေခင်းတွင် ကုန်းသို့တက် ကာ ပိုးမွှားနှင့် သစ်စေ့များကို ရှာဖွေစားသောက်နေတတ်သည်။ အနီးအနားသို့ သွားရောက် နှောက်ယှက်လျှင်၊ ပျံမပြေးဘဲ ချုံဖုတ် တောအုပ်များရှိရာသို့ ပြေးလွှားပုန်းအောင်းတတ်သည်။ မိုးရာသီ သားပေါက်ချိန်တွင် အလွန်ဆူညံ၍ တစ်ခါတစ်ရံ ညဉ့်လုံးပေါက် အော်နေတတ်သည်။ အသိုက်ကို ရေစပ်ရှိ ချုံပုတ်များတွင် မြက်ခြောက်၊ ဝါးရွက်ခြောက်များဖြင့် ပြုလု ...
ကာဒင်နယ်ငှက်ဟု အမည်တွင်သော ငှက်မျိုးမှာ ဖင့်စာကလေးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ မြောက်အမေရိကတိုက်နှင့် တောင်အမေရိကတိုက်တို့တွင် တွေ့ရသည်။ မျိုးစိတ်ပေါင်း ငါးဆယ် ရှိပြီး မြောက်ပိုင်းကာဒင်နယ်ငှက်လည်း တစ်မျိုးအပါအဝင် ဖြစ်သည်။
ကိုယ်လုံးကြီးမား၍ အလျား ၅ခန့်ရှိသည်။ ရွံ့နွံထူထပ်သော အရပ်တွင် တွေ့ရတတ်သည်။ အဖိုအမ တွဲ၍နေတတ်သည်။ တွန်သံမှာ သာယာသည်။ မြက်ထူထပ်သော ကွင်းပြင်၌လည်း နေတတ်သည်။ နားသည့်အခါ၊ ပျံသည့်အခါများတွင် အော်တတ်သည်။ အသီးအရွက် ပိုးမွှားနှင့် ခရုများကို စားသောက်သည်။ အုပ်လိုက်လည်း နေတတ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းတွင် အများဆုံးတွေ့ရတတ်သည်။ ကမ္ဘာ့အရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများတွင်လည်း တွေ့ရတတ်သည်။
ကွန်းဒေါလင်းတသည် ကမ္ဘာသစ်လင်းတမျိုးစိတ်နှစ်မျိုးကို ခေါ်သောအမည် ဖြစ်သည်။ ကွန်းဒေါ ဟူသောအမည်သည် ကွီချာလူမျိုးများ၏ ဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာသည်။ ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်းတွင် အရွယ်အစား အကြီးမားဆုံး ပျံသန်းနိုင်သောငှက်များ ဖြစ်သည်။ အန်းဒီးကွန်းဒေါလင်းတကို တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ အန်းဒီးတောင်တန်းဒေသတွင် တွေ့ရသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားကွန်းဒေါလင်းတကိုမူ မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံများ၏ အနောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်းတောင်တန်းများတွင်သာ တွေ့ရသည်။
နှုတ်သီးရှည်မြီးမဲ သည် ၁၇၅၈ ခုနှစ်တွင် ကားလ် လင်းနီးယပ် မှ ပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့သော ခြေထောက်ရှည် နှုတ်သီးရှည်သည့် ကမ်းရိုးတန်းငှက် တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
ဖိုးခေါင်ငှက် ရင်အုပ်၊ လည်ချောင်း ဦးခေါင်း အညိုဖျော့ဖျော့ အကြောင်အကျားဖြင့် မြက်ခင်းစိမ်းရောင်ရှိသော ငှက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလျား ၁၁ လက္မခွဲခန့် ရှိသည်။ ပေ ၄၀၀၀ထိ သစ်တောများနှင့် ဆက်စပ်နေသော သစ်ပင်အုပ်၊ ဥယျာဉ်နှင့် နှစ်ရှည်ပင် စိုက်ခင်းများတွင် တွေ့ရသည်။ ရွာများ၊ မြို့များကို ရှောင်ကွင်းလေ့ရှိသည်။ အဖို၏ ပိုင်နက်ခေါ်သံသည် အလွန်ကျယ်လောင်ပြီး ချိုသာစွာ ပူးပေါက် ပူးပေါက် ပူးပေါက် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှ ဇူလိုင်လအတွင်း သားပေါက်သည်။ ဌာနေငှက် ဖြစ်သည်။
ဗွတ်ခေါင်းမဲ ကို သိပ္ပံအမည်အားဖြင့် Brachypodius melanocephalos ဟု ခေါ်သည်။ ကိုင်းနားတေးဆိုငှက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ ဗွတ်ငှက် မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ သစ်တောများတွင် တွေ့ရှိရသည်။
ဗွတ်အမောက်မဲ ကို သိပ္ပံအမည်အားဖြင့် Rubigula flaviventris ဟု ခေါ်သည်။ ကိုင်းနားတေးဆိုငှက်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ ဗွတ်ငှက် မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုအိန္ဒိယတိုက်ငယ် မှ အရှေ့တောင်အာရှဒေသအထိ တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဘဲကျား အဖိုများသည် မျက်စိမှ ကုတ်ပိုးအထိ အစိမ်းရင့်ရောင် အရစ်ရှိပြီး နီညိုရင့်ရောင် ဦးခေါင်းနှင့် ကိုယ်လုံးမီးခိုးရောင် ရှိသည်။ အမများမှာ အညိုရောင်ပြောက်ကျား ဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလျား ၁၅ လက္မခန့် ရှိသည်။ ရေကန်များ၊ စိမ့်တောများတွင် တွေ့ရသည်။ အုပ်စုကြီးများ ဖွဲ့လျက်နေသည်။ အလွန်မြန်ဆန် အားကောင်းစွာ ပျံသည်။ အဖိုများသည် ညင်သာသော ခေါ်သံပြုပြီး အမများသည် လန့်ဖျပ်ရသည့်အခါ ကွိုက် ဟု စူးရှသော သံမြင့်ဖြင့် ခေါ်သံပေးသည်။ အောက်တိုဘာလမှ မတ်လအတွင်း တွေ့ရသော ဆောင်းခိုငှက်ဖြစ်သည်။
မန်ဒါရင်ဘဲသည် အာရှတိုက်အရှေ့ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိရပြီး ကြွကြွရွရွနှင့် အရောင်အသွေးအလွန်လှပသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရံဖန်ရံခါ တွေ့ရှိရသည်။ အမများမှာ သာမန်ဘဲမကဲ့သို့ အရောင်အသွေးလှပမှုမရှိသော်လည်း အဖို များမှာမူ ဘဲမျိုးများတွင် အရောင်အသွေးအလှပဆုံးအမျိုး ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် မေလတွင် အမွေးအတောင်လဲလေ့ ရှိကာ အမွေးလဲသည့်အချိန်တွင် အဖိုများမှာ အမများ၏အရောင်အသွေးကဲ့သို့ ပြောင်းလဲသွားလေ့ရှိသည်။
မလေးကြက်တူရွေး ၏ သိပ္ပံအမည်မှာ လော်ရီကူးလက်စ်ဂါဂူးလက်စ် ဖြစ်သည်။သေးငယ်သောကြက်တူရွေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးအစိမ်းရောင်ရှိသည်။ ကိုယ်အလျား ၁၃ စင်တီမီတာ ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တနင်္သာရီတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၏ကျွန်းဆွယ်ဒေသ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ စူမတ်တြားကျွန်း၊ ဂျာဗားကျွန်းနှင့် ဘော်နီယိုကျွန်းတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ပန်းပွင့်များ၊ အဖူးများ၊ ခွံမာသီးများ၊ သစ်သီးများ၊ သစ်စေ့များကို စားသည်။